Fampahalalana mahasoa ho an'ny olon-drehetra - Fizarana 10275
Ahoana ny fomba hamoronana drafitra mazava amin'ny teny, kilasy 1, ohatra?
Ahoana ny fomba hanaovana sary tsara amin'ny teny iray, naoty 1, ohatra? Vao tsy ela akory izay, ny rahalahiko tany am-pianarana dia nomena ny teny hoe: Zhik, Tank. Tsy maintsy tadidiko daholo izay nianarako tany am-pianarana taloha. Tsaroako izany tamin'ny olon-drehetra ...
Aiza no ahitako ny bokin'ny andian-dahatsoratra amin'ny Internet?
Aiza no ahitanao ny mari-piatoan'ny lahatsoratra an-tserasera? Raha ny hevitro, ny programa tsotra sy azo antoka indrindra amin'ny fanamarinana ny mari-piatoana amin'ny Internet dia ny Microsoft Office Word miaraka amina programa misy tetik'asa naroso. Raha ny hevitro, izy ireo dia ...
Ahoana no hahalalana ny anaran'ny tompon'ny finday nomerao maimaim-poana?
Ahoana no hahitana ny anaran'ny tompony amin'ny nomeraon-telefaona maimaim-poana? Raha te hahalala maimaimpoana hoe iza no tompon'ny nomeraon-telefaona dia tsara ny hananana olom-pantatra ao amin'ny salon finday izay hanandrana sy hizaha toetra anao ...
Inona no haben'ny format A1, A2, A3, A4?
Inona ny haben'ny endrika A1, A2, A3, A4? Eny, tokoa, ireo endrika ireo dia tsy miova, manana habe iray izy ireo, izay faritan'ny fenitra iraisam-pirenena. Ho any Russia sy Torkia ohatra, ohatra. ...
Inona no anarana tsy tian'ny olona?
Inona no anarana tsy mirona? Mipetraka matetika ny fanontaniana hoe iza no anarana fironana, satria na eo amin'ireo foko rosiana aza dia maro ny anaram-pianakaviana manana fiaviana avy, tsy lazaina intsony ny vazaha. Mandritra izany ...
Fihetsiketsahana mankasitraka ny zanany lahy tamin'ny ray aman-dreniny?
Fiarahabana mampihetsi-po ho an'ny zanaka lahy iray taona avy amin'ny ray aman-dreny? Azo antoka fa tsy hahatakatra ny teny ny zaza. IMHO, fa ho an'ny ankizy toy izany, ny fiarahabana mampihetsi-po indrindra dia ho zavatra mamirapiratra sy manaitra. Ohatra, tiako ny ankizy manokana ...
Inona no marika DEXP? Hevitra? Ilaina ve ny mividy?
Inona ny marika DEXP? Hevitra? Tokony hividy ve ianao? Ny marika DEXP dia tonga nanolo ny marika DNS. Hatramin'ny nahazoan'ny marika DNS tsikera ratsy maro momba ny kalitaony, satria handeha ...
Firy no mahita ao amin'ny 1 dm?
Ohatrinona ny mahita ao amin'ny 1 dm.? 10cm. Tsy haiko ny maninjitra azy amin'ny tarehin-tsoratra 40 :-) Misy 10 santimetatra ao anatin'ny iray santimetatra. Nandalina tsara tany am-pianarana aho ary noho izany dia tadidiko io fepetra hafahafa io ho antsika rehetra ...
Ahoana no ahalalana ny fikambanana TIN?
Ahoana ny fomba hamantarana ny fikambanana amin'ny TIN? Ity misy rohy mankany amin'ny tranokala hetra http://egrul.nalog.ru/ hahitanao amin'ny TIN ny anaran'ny fikambanana, toerana, PSRN, fizahana fizarana, datin'ny fisoratana anarana, fanovana ary GRN. Any Ukraine dia misy fisokafana ...
Ahoana no hiantso ny mpandraharaha amin'ny Megaphone?
Ahoana ny fomba hiantsoana mpandraharaha Megafon? Raha mpandala ny nentin-drazana ianao ka tsy te-hiakatra ny tranokala megaphone, vakio tsara ary soraty ao anaty kahie) Raisinay ny telefaona ary, na inona na inona faritra, dia tsindrio ny 0500 ...
Ny fijerena satelita tena misy amin'ny Internet. Aiza no ahitako azy?
Hijery ny zanabolana amin'ny Internet an-tserasera. Aiza no ahitanao? Azonao atao ny mijery amin'ny alàlan'ny fakantsary an'ny International Space Station amin'ny tranokala: http://space.utema.ru/earth-online/, misy ihany koa ny valin'ny fanontaniana sasany ...
Previous Page pejy 1 ... pejy 10 pejy 10
67 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 2,252.